‘पारिवारिक र सामाजिक विभेदमा स्पाइनल कर्ड इन्जरी भएका महिला’ |
‘पारिवारिक र सामाजिक विभेदमा स्पाइनल कर्ड इन्जरी भएका महिला’
प्रकाशित मिति :2017-08-23 16:02:00
काठमाडौं । ओखलढुङ्गा चम्पादेवी गाउँपालिका ४ सौरिनीकी तुलसा खत्री वर्षले २२ पुगिन् । तुलसाको कम्मर तलको भाग चल्दैन । दाँया हातको औँला चल्छ, तर नाडी चल्दैन । बाँया हातको औला पनि चल्दैनन् । दिसापिसाब गरेको समेत भेउ पाउँदिनन् । दश वर्षको उमेरमा घरनजिकै भिरबाट लडेर कम्मरदेखि तलको भाग नचल्ने भएकी तुलसा ह्वीलचियरको सहाराले मात्रै हिँडडुल गर्न सक्छिन् ।
‘घरमा ७१ वर्षीया आमा र म मात्रै छौं । उहाँ केही गर्न सक्नुहुन्न । सुतेर खाने बहिनी र बसेर खाने आमालाई हेर्न सक्दैनौं भनेर दाजुभाउजुले समेत छोडेर गए । घरमा खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, घर लिप्ने, कसिङ्गर लगाउने काम म आफैँ गर्छु ।’ उनले भनिन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी तुलसाका आमा छोरी सरकारले दिने अपाङ्ग भक्ता र वृद्धा भक्ताबाट जीवन चलाउँदै आएका छन् ।
तुलसाका अनुसार घरमा भएको जग्गा जमिन पनि दाजु भाउजुको नाममा छ । उनी सानै हुँदा बुबाको देहान्त भयो । दाजुभाउजुले छोडेर गएपछि केही समय त हामी विचल्लीमा परेको बताइन् । तुलसाको समस्यालाई मेडिकल भाषामा स्पाइनल कर्ड इन्जरी भनिन्छ । उनको शरीरको कम्मरदेखि तलको भाग नचल्दा घरपरिवार र समाजबाट समेत अपहेलना सहनुपरेको उनले बताइन् । स्पाइनल कर्ड इन्जरी भएका व्यक्तिले सरकारी सहयोग पाउने भनेपनि अहिलेसम्म कुनै सहयोग नपाएको उनले गुनासो गरिन् ।
गोरखा मिर्कोटकी ४२ वर्षीया मीरा खड्काको समस्या पनि त्यस्तै छ । १७ वर्षको उमेरमा स्पाइनल इन्जरी भएकी मीरा अहिले काठमाडौंको कलङ्कीमा आफन्त कहाँ बस्दै आएकी छिन् । खड्काले पनि दिसा पिसाव गरेको थाहा पाउँदिनन् । स्पाइनल कर्ड इन्जरी भएसँगै पटक–पटक पिसावमा समस्या देखिए पछि उपचार गर्न समेत समस्या भएको बताइन् । गत माघमा ढाडको शल्यक्रिया गरेसँगै मीरा ह्वीलचियरको सहायताले समेत हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छन् ।
उनले भनिन् –अहिले आफन्तको शरणमा बसेको छु । दिसा पिसाव आएको समेत थाहा हुँदैन । आफन्त पनि कहिले त झर्किन्छन् । कम्मर तलको भाग चल्दैन, झन् ढाडको शल्यक्रिया गरेपछि ह्वीलचियरमा समेत बस्न नसक्ने अवस्थामा पगेको छु ।’
गोरखाकै लिगलिग कोटमा विवाह भएको मिरा खड्गाको विवाह गरेको केही समयपछि परालको भारी बोक्दा खुट्टा मर्कियो । खुट्टा मर्किएपछि सुई लगाएको र झन् समस्या बल्झिएको उनले बताइन् । अन्त्यमा कम्मर तलको भाग नै चल्न छोड्यो । मीरालाई २०४७ सालमा स्पाइनल कर्ड इन्जरी भएपछि श्रीमान् र ससुराले काठमाडौं ल्याएर छोडिदिएका थिए । त्यसको केही समयपछि श्रीमानले दोस्रो विवाह गरे । मिरासँग विहे दर्ता समेत छैन । त्यसैले उनी अंश पाउनबाट समेत बञ्चित भएकी छन् ।
भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका २ दुवाकोटकी २६ वर्षीय शोभा बाटीको पनि कम्मर तलको भाग चल्दैन । दिसा पिसाब गरेको पनि थाहा पाउँदिनन् । उनी अहिले भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक पहिलो वर्षमा पढ्दै छिन् । ह्वीलचियरकै सहायताले उनी कलेजदेखि घरसम्म आउने जाने गर्छिन् । कलेजमा महिनावारी भएको बेला शौचालय जान समस्या हुने उनले बताइन् ।
उनले भनिन् –‘प्याड बेला बेलामा चेन्ज गर्नुपर्छ । तर, टिचरले बुझ्दैनन् । ट्वाइलेट पनि ह्वीलचियर फ्र्ेड्ली छैन ।’ ११ वर्षको उमेरमा टाउको दुख्ने र ज्वरो आउने समस्या भएसँगै शोभालाई स्पाइनल कर्ड इन्जरी भएको थियो ।
उनले भनिन्–‘टाउको दुख्ने र ज्वारो आउने समस्या भएपछि परिवारले पाटन हस्पिटलमा २ महिना उपचार गरे । तर उल्टो कम्मर तलको भाग चल्न छोड्यो । त्यसपछि परिवारले उपचारका लागि बनेपा अपाङ्ग अस्पतालमा पुर्याए । तर केही सुधार आएन् ।
नेपालमा प्राकृतिक विपद्का साथै सडक दुर्घटनाका कारण स्पाइनल इन्जरी हुनेक्रम बढ्दो छ । स्पाइनल इन्जुरीकै कारण पुरुषको तुलनामा महिलाहरुलाई बढी समस्या हुने गर्दछ । कतिपय आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरुले उपचार समेत पाउन सकेका छैनन् ।
के हो स्पाइनल कर्ड इन्जरी ?
स्पाइनल कर्ड मेडिसिन एण्ड रिह्याबिलिटेसन विज्ञेषज्ञ डा. राजु ढकालका अनुसार शरीरमा घाँटी, ढाँड र कम्मरको पछाडी मेरुदण्डीय हाडहरु ३३ वटा हुन्छन् । ३३ वटा हाडको बीचमा स्पाइनल क्यानल भन्ने हुन्छ । स्पाइनल क्यानलबाट स्पाइनल कर्ड बनेको हुन्छ ।
हाम्रो कम्मरको तल्लो भागदेखि शरिरको सबै सूचनाहरु स्पाइनल क्यानलले स्पाइनल कर्डको माध्यमबाट हाम्रो दिमागमा लिएर जान्छ । यो ढाडको माध्यम हुँदै दिमागमा जोडिएको हुन्छ । कुनैपनि चोटपटक, अथवा रोगका कारणले होस् अथवा जन्मजात र कुनै पनि कारणले गर्दा स्पाइनल कर्डमा भएको असरले गर्दा नै शरिरको कुनै भाग नचल्ने अवस्था देखा पर्दछ । जसलाई हामी स्पाइनल कर्ड इन्जरी भनेर भन्छौ ।
स्पाइनल कर्डमा कहाँनिर चोट लागेको छ, त्यसमा भरपर्छ । जस्तै घाँटीको पछाडी भागमा चोट लागेको छ भने त्यो भन्दा तलको सम्पूर्ण भागले काम गर्न छोड्छ । जस्ले गर्दा हात नचल्ने, गोडा नचल्ने, मुटुले राम्रोसँग काम नगर्ने हुन सक्छ । दिसा पिसाबको समस्या, कडापन दुखाई हुने हुन्छ । छाती अथवा त्यो भन्दा मुनी भयो भने सबैलाई माथिकै समस्या हुन्छ तर हातलाई असर गर्दैन । कति गहिरो चोट लागेको छ, त्यसमा भरपर्छ ।
महिलालाई कस्तो समस्या हुन्छ ?
डा. ढकालका अनुसार महिलालाई स्पाइनल कर्ड इन्जरी हुँदा महिनावारी रोकिने सम्भावना हुन्छ । महिलाको प्रजनन् प्रक्रियामा असर पर्छ ।
नेपालमा पुरुषप्रदान देश भएको कारण यदि कुनै महिला घाँस काट्न जाँदा वा कुनै कारणले स्पाइनल इन्जरी भएमा हस्पिटलसम्म लैजान समेत हिचकिचाउने अवस्था आउने डा. ढकालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘हस्पिटलसम्म ल्याएपनि हिँड्न गाह्रो हुन्छ, दिसापिसाव र घाउको समस्या हुन्छ । बच्चालाई हेर्न नसक्ने भएपछि श्रीमानले अर्को विवाह गर्ने गर्छन् । जस्ले डिप्रेसनको अवस्था आउँछ ।’
नेपाल स्पाइनल कर्ड इन्जरी खेलकुद संघकी अध्यक्ष गायत्री दाहालले ‘स्पाइनल कर्ड इन्जरी’ महिला र पुरुषकाबीचमा पनि विभेद हुने बताउनुभयो । उहाँले स्पाइनल कर्ड इन्जरी भएका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
स्पाइनल इन्जरी पुर्नस्थापना केन्द्र काभ्रेकी मनोपरामर्शदाता कल्पना विष्टले स्पाइनल कर्ड इन्जरी भएका महिलाले घरपरिवार र समाजबाट अपहेलना सहन बाध्य भएको बताउनुभयो । विवाहित महिला भए झन् समस्या हुने उनको भनाई छ ।
सरकारले कुनै कारणले स्पाइनल कर्ड इन्जरी र टाउकाको ठूलो चोटपटक (हेड इन्जरी) भई बिरामी भएका गरिब बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत बढिमा एक लाख रुपैँयासम्म उपचार सेवा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिदास शर्माले जिल्लामा गठन भएको विपन्न नागरिक सिफारिस समितिले विपन्न नागरिक हो भनेर सिफारिस गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले सुचिकृत अस्पतालबाट एक लाख रुपैँया बराबरको सहुलियत पाउने बताए ।